Zụta Dienolone ntụ ntụ (6218-29-7) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Dienolone ntụ ntụ (6218-29-7)
SKU: 6218-29-7. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Dienolone ntụ (6218-29-7), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Dienolone ntụ ntụ (Dienolone (Trenazone Tren X)) bụ ọgwụ anabolic-androgenic steroid (AAS) nke 19-nortestosterone nke na-esighi ahịa. Dienolone nwere anabolic na androgenic ratio nke 100 / 10 tụnyere methyl-testosterone, na-egosi na ọ na-pụtara anabolic ma ọ bụghị nnọọ androgenic ...
Dienolone ntụ ntụ video
Dienolone ntụ ntụ isi agwa
aha: Dienolone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C17H22O2
Ọbara arọ: 258.36
Melt Point: 189-192 ° C
agba: Gbanyụọ odo Crystalline ntụ ntụ
Dienolone ntụ ntụ
Aha Igwe: Dienolone ntụ ntụ, a na-akpọ "tren".
Aha ndị ọzọ: ma ọ bụ Dienolone ntụ ntụ, RU-3118, Trenazone, Dienazone, Trenazone Tren X
Dienolone ntụ ntụ Usage
Dienolone raw ntụ ntụ (Dienolone ntụ ntụ (Trenazone Tren X)) bụ ọgwụ anabolic-androgenic steroid (AAS) nke 19-nortestosterone na-esighi ahịa. Achọpụtawo na enwere ọbụbụenyi dị ala karị maka onye na-anabata etrogen (AR) na onye na-anabata ya (PR) gbasara nandrolone na oke anụ na rabbit anụ ahụ, ebe a hụrụ trenbolone inwe otu njikọ ahụ maka AR dị ka Dienolone ntụ ma ọtụtụ- abiawanye ubara maka PR. Nkọwapụta (17) dịka 19-na-4,9-androstadienedione) bụ nke a makwaara dịka 17-na-17-androstadienedione), na methylDienolone ntụ ntụ na ethylDienolone raw ntụ ntụ bụ ọrụ XNUMXA-alkylated AAS nke Dienolone uzuzu. N'ụzọ dị iche, dienogest, mmepụta XNUMXa-cyanomethyl nke Dienolone raw ntụ ntụ, bụ progestogen na antiandrogen.
Ọdịdị dị iche iche ga-adịgasị iche na usoro ọgwụgwọ, ma n'ọtụtụ dosages Trenazone ga-enyere aka na mbenata ọkpụkpụ, mee ka ike ịkpụ ahụ dịkwuo elu, mekwuo ikike muscular, welie mgbake, ma kwalite mgbatị ndị ọzọ.
O siri ike ịkọpụta ihe n'ihi na a na-ejikarị Trenazone eme ihe n'elu ihe ndị ọzọ, ma ọ na-eweta nsonaazụ ọhụụ ma ọ bụrụ na nri, ọzụzụ, na dosing bụ ntụpọ na.StackingTrenazone bụ onye na-ewu ewu, n'ihi na ọ bụghị methylated nke na-enye ohere ndị ọrụ jikọtara ya na anabolic methylated dịka Epistane. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-achọ ịnakọta onyinye a dị elu na steeti androgenic iji nye ihe nrịta anabolic / androgenic. Trenazone nwere ike tinye n'ọrụ ma ọ bụ nnukwu ma ọ bụ ịkpụ. N'okpuru ebe a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ọtụtụ anabolics Trenazone na-ejikarị:
Ogige Methylated (Epistane, Methyl-Stenbolone, D-Plex, wdg)
Ogige Ndị Na-adịghị Methylated (Stanodrole, 1-DHEA, 11-oxo, wdg)
Kedu ihe nkedo nke Dienolone ntụ ntụ
A na-ejide ngwaahịa a na ngwaahịa methylated n'ihi na ọ na-agbakwunye obere eriri imeju. Dịka ya na 1-1.5mg nke Trenazone kwa ụbọchị, ọ bụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na pro-hormone ma ọ bụ onye na-emepụta ihe na-ahụ maka steroid nwere ike ịnwale na dosages na elu nke 75ML (112.5mg) kwa ụbọchị. dịka siri ike na mgbatị ahụ gị nwere ike ịgbatị ruo izu 2 n'ogologo na izu 150 kachasị. Imirikiti ndị ọrụ ga-amalite na-achọpụta mmetụta site na izu nke atọ n'ụdị nke ike siri ike / na-amụbawanye ike. Ndị ọrụ ọgbara ọhụrụ ga-anọrịrị n'ozuzu ha n'ozuzu n'ozuzu ha, ha agafeghị izu 8 n'ogo ogologo oge, ọ bụ ezie na ndị ọkachamara nwere ahụmahụ nwere ike iji ọsọ na-agba ọsọ maka izu 6.Transdermal preparations nwere ogologo ọkara ndụ, yabụ otu ngwa ngwa kwa ụbọchị nke Trenazone ga-adị mma. Ebe kachasị mma iji tinye Trenazone bụ olu, karịsịa olu n'olu n'elu ụbụrụ, azụ azụ, n'apata ụkwụ, obi, na afọ.
Otú Dienolone ntụ ntụ si arụ ọrụ
Dienolone ntụ ntụ (4,9-estraDienolone raw powder) bụ ihe ndị "prren precursors" na-ewu ewu gbanwere n'ezie. Methylated mbipute a steroid (methylDienolone ntụ ntụ) dị n'elu counter na ahịa dị ka ọnụebu trenbolone tupu a machibidoro ya na ọtụtụ ndị ọzọ steroid na prohormones na mmalite 2005. Dienolone raw ntụ ntụ na trenbolone dị nnọọ n'usoro, ma ha ekwesịghị ịtụle dịka otu.
Dienolone ntụ ntụ nwere ụdị androgenic nke 100 / 10 ma jiri ya tụnyere methyl-testosterone, na-egosi ya dịka anabolic mana ọ bụghị nnọọ androgenic. Dienolone ntụpụ adịghị atọghata na estrogen, ma ọ nwere ọrụ mmemme nke nwere ike ịbawanye uru nke estrogen. N'ihi nke a, Dienolone raw ntụ ntụ adịghị atụkwasị ya na steroid ndị ọzọ ma ọ bụ ndụmọdụ ndị nwere oke mgbanwe nke estrogen. Dịka trenbolone, Dienolone ntụ ntụ nwere ike inwe ụdị mmetụta thermogenic, ọ na-arịwanye elu nke ahụ ọkụ ma na-enyere onye ọrụ ahụ akafuba abụba. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, Dienolone raw ntụ ntụ kwesịrị iji trenbolone ma ọ bụ nandrolone na-enweghị mgbanwe nke estrogen.
Dienolone ntụ ntụ ekwesịghị ịdị oke ike na mmebi mmetụta nke etrogenic ma ọ bụ estrogenic, ma ọ bụla na-akpata ọrịa steroid androgenic bụ ihe ga-ekwe omume na mmepụta ihe ọkpụkpụ nke Dienolone raw ntụ ntụ na-eme ka gynecomastia mee. Dienolone ntụ ntụ abụghị methylated nke mere mgbe a na-eji ọnụ ekwu okwu ekwesịghị itinye nnukwu nchegbu na imeju.
O bu ihe nwute, enweghi otu C-17 methyl na-eme ka Dienolone raw uzuzu nwee ezigbo ogwu ogwu, ya mere nke a abughi uzo di nma iji were steroid. Kama nke ahụ, onye ga-achọ ịchọrọ kpọmkwem Dienolone raw ntụ. Dienolone ntụ ntụ nwere ike jiri ya mee ihe dị ka transdermal (na-etinye uche na akpụkpọ ahụ), na ụdị injectable nke steroid a nwekwara ike ịdị irè.
Ejiri "Diet Dr. Tren" jiri obi ụtọ na-eme ihe ọchị n'ihi na ọ na-achị ọchị ma na-ejikọta ya na ntanetị, Dienolone na-esi na Nandrolone klas nke anabolic-androgenic steroid (AAS). Dịka okwu ahụ pụtara, Dienolone raw powder (A / A 100: 10) na-egosiputa ihe ndị e ji echeta Trenbolone (A / A 500: 500); n'agbanyeghị na ọ ka dịkwuo nwayọọ karịa karịa ọkacha mmasị. N'agbanyeghi ihe di iche iche na-adighi ike na akwukwo, ihe ndi ozo na ike bu ihe di iche iche nke Dienolone raw powder inclusive protocols. Dienolone ntụpụ anaghị enwe ike ịmegharị hypertrophy dịka Testosterone, Oxymetholone, na Methandrostenolone. Otú ọ dị, ọ na-ejikọta ya na androgen nke ukwuu na-enwe ike ịmepụta mgbidi ahụ. N'ihe dị otú a, Dienolone raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ dị mkpa nke na-akwado akụkụ ndị nwere ogo, mana ekwesighi ka ewere ya dị ka steroid nke abụọ site na ihe ọ bụla. Ezigbo uru nke Dienolone ntụ ntụ bụ na mgbakwunye ya bụ ịba ụba dị iche iche ma ọ bụrụ na ị gbakwụnye.
N'agbanyeghị mmekọrịta nke dị n'etiti Dienolone raw ntụ ntụ na Trenbolone, nzaghachi nke anecdotal na-egosi na ọ bụ ihe kachasị mma karị ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere - enweghi mmetụta na-akpata: enweghi ụra, mgbakasị, mwakpo mmiri, "ụkwara ụkwara," wdg. na-echekwa ya site na 11-ene akụkụ nke usoro Trenbolone, nke na-anọghị na Dienolone ntụ ntụ. Ihe a na-ahụkarị bụ na ha abụọ na-egosipụta nhụsianya siri ike na njiri anabolic-androgenic na Dienolone raw ntụ ntụ na-eme ka àgwà anabolic dị ukwuu. Nke a dị ka onye na-enye aka kpọmkwem na mmetụta ndị dị na mbụ. Ịdị nwayọọ ọ bụghị, ma dị ka onye na-adịghị mma na nwanne ya nwanne, Dienolone ntụ ntụ na-enye arụnyere arụmọrụ na uru na-enweghị obi erughị ala.
Dienolone raw ntụ ntụ emeela ka ọ pụta ìhè n'ile ahịa na-emepụtawanye n'ụdị ọrụ, methylated, na ụdị dị iche iche. Ọganihu ya dịka "onye na-arụpụta ahụ ike" nwere ike ịsị na Dienolone na-emepụta ihe ntụpọ dị ka Trenbolone analogues. Ihe omuma ahia nke a tinyere njirimara nke steroid nwere ike ime ka Dienolone raw uzuzu na ndi ozo pro-hormone. Ọ bụghị ruo mgbe e sipụrụ ahịa dị iche iche dị ka ihe ndị a na-achịkwa, ndị Dienolone raw ntụ ntụ hụrụ onwe ha ka a na-eji ha eme ihe; Ihe mgbakwunye "Pro-Tren" nwere mmasị mbụ na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịme ngwa ngwa. N'ụzọ dị mwute, ntụpọ Dienolone na-adịghị edozi agbanwe nọgidere na-anọghị na ndepụta ọ bụla na "ndepụta a machibidoro iwu." Nke a nyere ohere pụrụ iche iji chekwaa nnweta ya na ndị na-achọ mmelite arụmọrụ.
Enweghị ihe mgbakwunye methyl ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe, usoro ntụpọ nke Dienolone adịghị enwe ike ịnweta nchịkwa ọnụ n'emeghị ka ọ daa mbà. Mgbe o siri ike, ahịa ndị na-emewanye ememe na-emetụta ihe ndị na-emepụta ihe ndị na-ebugharị transdermal dị ka ụzọ isi zere ịda mbà mmiri. N'agbanyegh i na usoro nnyefe nke transdermal a, mmejuputa nke DASCA gbara otutu ulo oru ume ka ha wepu ihe ndi pro-hormone kpamkpam. N'ịbụ ndị nchegbu nke mmefu nke mgbapụta na-enweghị nchekasị, ụlọ ọrụ ndị na-eme nchọpụta nke ugbu a na-eme nke ọma amalitela ịhazi ihe ndị e ji mmanụ mee maka ụdị ngwaahịa ha. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị maka nchọpụta, ngwọta ndị a nwere ike ịghọ ihe na-asọpụrụ ndị na-achọ inweta ihe ha ga-esi nweta "ihe ọmụmụ" ha.
Dienolone raw ntụ ntụ Marketing
Dienolone raw ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Mmetụta dị n'akụkụ na Trenazone anaghị adịkarị mgbe a na-eji ya naanị ya, ma ọ nwere ike iweli mgbali elu ma gbanwee egbugbere ọnụ ya dị ka ọnụọgụ ọ bụla. N'ihi na enwere njikọta maka onye nkwụnyeghachi gyno ga-abụ ihe ga-ekwe omume, ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka nke a dị elu dịka epistane ma ọ bụ stanodrol, ọ ga-enyere aka belata nke a.Ebe ọ bụla onye na-emepụta steroid ma ọ bụ pro-hormone mmetụta nwere ike ime na na ọtụtụ ikpe ha na-ezere site n'ịgbaso nduzi nduzi kwesịrị ekwesị. Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke ụfọdụ mmetụta mmetụta ndị ọzọ na Trenazone:
Ezigbo Libido / Mmekọahụ
Nchegbu / Mmetụta Na-emetụta
Ọnwụ ọbara na-arịwanye elu
Nleghachi azụ (Mgbu na-egbu mgbu n'azụ azụ / mgbe a na-arụ ọrụ)
Esi zụta Dienolone ntụ ntụ si AASraw
Dienolone raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka
Progesterone ntụ ntụ (57-83-0)
17α-Hydroxyprogesterone ntụ ntụ Acetate ntụ ntụ (302-23-8)